Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Iihotele zaseHawaii zinengeniso enkulu ngoJuni 2021
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Luphawu oluqinisekileyo ukubona indawo yokuhlala ehotele eHawaii kwilizwe lonke inika ingxelo yokunyuka okuphezulu, esazi ukuba bangaphi abasebenzi basekuhlaleni kunye neentsapho ezixhamlayo ekubuyeni kweemarike zasekhaya.
Ingeniso yegumbi lasehotele eHawaii kwilizwe lonke inyuke yaya kuthi ga kwi-387.7 yezigidi zeedola ngoJuni.
Iihotele zeMaui County zikhokele ii-counties ngoJuni.
Ngesiqingatha sokuqala sika-2021, ukusebenza kwehotele yaseHawaii kwilizwe lonke kuyaqhubeka kuchaphazeleka sisibetho se-COVID-19.
Hawaii iihotele kwilizwe lonke zichaze ingeniso ephezulu kwigumbi ngalinye (i-RevPAR), umyinge wereyithi yemihla ngemihla (i-ADR), kunye nokuhlala ngoJuni 2021 xa kuthelekiswa noJuni 2020 ngexesha u-Quarantin u-rhu lumente wedwa kubahambi ngenxa ye-COVID-19 ubhubhane kukhokelele ukwehla okumangalisayo Icandelo lehotele. Xa kuthelekiswa noJuni 2019, ilizwe liphela i-RevPAR kunye ne-ADR zaziphezulu ngoJuni 2021 kodwa ukuhlala kwakusezantsi.
Ngokwengxelo yeHawaii Performance Performance Report epapashwe ngu Igunya lezoKhenketho eHawaii (HTA), I-RevPAR yelizwe liphela ngoJuni 2021 yayiyi-247 yeedola (+ 769.5%), ene-ADR kwi-320 yeedola (+ 127.0%) kunye nokuhlala kweepesenti ezingama-77.0 (+56.9 yeepesenti). Xa kuthelekiswa noJuni 2019, i-RevPAR yayiyi-4.8 yepesenti ephezulu kunamanqanaba e-2019, eqhutywa yi-ADR ephezulu (+ 14.2%) ebeka indawo yokuhlala encinci (-6.9 ipesenti yamanqaku)
"Luphawu oluqinisekileyo ukubona indawo yokuhlala ehotele kwilizwe lonke inika ingxelo yokunyuka okuphezulu, esazi ukuba bangaphi abasebenzi basekuhlaleni kunye neentsapho ezixhamlayo ekubuyeni kweemarike zasekhaya," utshilo uJohn De Fries, umongameli we-HTA kunye ne-CEO.
"Ngexesha leenyanga ezintandathu zokuqala, nangona ihotele iREPAR kunye nokuhlala bekungekho ndawo kufutshane namanqanaba obhubhane wango-2019, kuyakhuthaza ukubona ukubuya okuzinzileyo kwemisebenzi kunye namathuba e-kamaaina ebengekho kunyaka ophelileyo."
Iziphumo zengxelo zisebenzise idatha equlunqwe yi-STR, Inc., eqhuba olona hlolisiso lukhulu nolubanzi lweepropathi zehotele kwiiIawaiiian Islands. NgoJuni, uphononongo lwaluquka iipropathi ezili-138 ezimele amagumbi angama-44,614, okanye iipesenti ezingama-82.6 yazo zonke iipropathi zokulala¹ kunye neepesenti ezingama-85.2 zeendawo zokuhlala ezinamagumbi angama-20 okanye nangaphezulu kwiiIqithi zaseHawaii, kubandakanya inkonzo epheleleyo, inkonzo encinci, kunye neehotele zekhondomu. Ukuqeshiswa kweholide kunye neepropathi zokwabelana ngexesha azange zibandakanywe kolu phando.
Nge-Juni ka-2021, uninzi lwabakhweli befika bevela ngaphandle-kurhulumente kwaye behamba phakathi kwe-county banokugqitha kwisinyanzelo sokuzibamba sodwa esineentsuku ezili-10 ngesiphumo esingalunganga sovavanyo lwe-COVID-19 NAAT esivela kwiQabane loVavanyo oluThenjiweyo ngaphambi kokumka kwabo baye eHawaii. ngenkqubo yokuHamba ngokukhuselekileyo. Ukongeza, abantu abagonywe ngokupheleleyo kwi Hawaii ingadlula kumyalelo wokuvalelwa wedwa ukuqala ngoJuni 15. Izithintelo zokuhamba zangaphakathi kwi-county ziye zaphakanyiswa kwakhona nge-15 kaJuni.
Ingeniso yegumbi laseHawaii kwilizwe lonke inyuke yaya kuthi ga kwi-387.7 yezigidi zeedola (+ 1,607.1% vs. 2020, + 1.5% vs. 2019) ngoJuni. Imfuno yegumbi yayili-1.2 yezigidi zobusuku bamagumbi (+ 652.0% vs, 2020, -11.1% vs. 2019) kunye nokubonelelwa kwegumbi kwakungu-1.6 yezigidi zobusuku kwigumbi (+ 96.3% vs 2020, -3.2% vs. 2019). Iipropathi ezininzi zivaliwe okanye zinciphise ukusebenza ukuqala ngo-Epreli 2020. Ngenxa yokuncitshiswa konikezelo, idatha yokuthelekisa yeemarike ezithile kunye neeklasi zamaxabiso zazingafumaneki ngo-2020; uthelekiso no-2019 longeziwe.